အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: အတောင်တူသော ဌက်များ အတူတူ ပျံသန်းနေကြသည်...
အတောင်တူသော ဌက်များ အတူတူ ပျံသန်းနေကြသည်...
အွန်လိုင်းလောက။ တစ်နည်းအားဖြင့် Virtual World!
အကန့်အသတ်မဲ့သော လေထုအတွင်းမှာ ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ media တစ်ခုသည် ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် လူနေမှုဘ၀အတွင်းသို့ တိုးဝင်လာခဲ့တာ နှစ်အတန်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ထို့အတူ Website များ၊ Blog များ၊ Forum များဖြင့် အသွင်ပုံစံ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေသော Virtual World အတွင်း နေ့စဉ် ထိတွေ့နေမိသော ပတ်ဝန်းကျင်သည်လည်း မတူညီနိုင်ကြပေ။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့သည် စိတ်ဝင်စားရာ နေရာတစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်လျက် စုဝေးမိတတ်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အတောင်တူသော ငှက်များသည် အတူတူ ပျံသန်းတတ်ကြသည့် သဘောဖြစ်သည်။ ထိုအထဲမှာမှ MEF!
MEF ကို ဘာကြောင့် သုံးနေကြတာလဲဆိုတာ လူတိုင်းမှာ သူ့ အကြောင်းတရားနဲ့သူတော့ ရှိကြမည် ထင်ပါသည်။ လိုချင်သော ဗဟုသုတ၊ အချက်အလက်တို့ကို လိုက်လံရှာဖွေမည်။ မိမိသိထားခဲ့သော အချို့အရာကိုလည်း သူတပါးအတွက် အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါစေရယ်ဖြင့် ချန်ထားရစ်ခဲ့မည်။ Online discussion လုပ်သော နေရာလေး တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့တည်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် ပြသနာတစ်ချို့ကို တိုင်ပင်နည်းနောမည်။ စိတ်ဝင်စားသော အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို ရှုထောင့်အဖုံဖုံမှ သုံးသပ်ဆွေးနွေးမည်။ ထိုထိုအစရှိသည့် အကြောင်းအရာတို့ထက် ပိုသော အဓိပ္ပါယ်များဖြင့် MEF တွင် စကားလုံးတွေ အများကြီး ရှိနေသည်။ MEF တွင် အဖွဲ့ဝင်အများစု ရှိနေသည်။ MEF တွင် ရည်ရွယ်ချက်များစွာ ရှင်သန်နေသည်။
MEF အတွင်းတွင် အတွေ့အကြုံ နုနယ်သော မျိုးဆက်သစ် အင်ဂျင်နီယာများစွာ ရှိနေသည်။ စာရွက်ပေါ်မှ လေ့လာခဲ့သော ပညာရပ်များအား လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံမှ ရသောပညာများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး သင်ယူနေသော မျိုးဆက်ထမ်း အင်ဂျင်နီယာများစွာရှိသည်။ အတွေ့အကြုံ အတော်အသင့်ရရှိပြီး မဆုံးသော လေ့လာခြင်းမျိုးဖြင့် ဆက်လက် လေ့လာနေသော မျိုးဆက်မြင့် အင်ဂျင်နီယာများစွာ ရှိသည်။ Professional များ ရှိသည်။ Learner များ ရှိသည်။ Student များ ရှိသည်။ နေရာပေါင်းစုံကလူတွေ၊ အတွေးပေါင်းစုံနှင့် ခံယူချက်ပေါင်းစုံသည် MEF အတွင်း မျှောပါစီးဆင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
MEF ကောင်းကင်အတွင်း ပျံသန်းနေသော ငှက်ငယ်များသည်လည်း အသွေးအရောင် မတူညီသကဲ့သို့ တောင်ပံကိုယ်စီ၏ အားမာန် တို့သည်လည်း မတူညီကြပေ။ တစ်ချို့က လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဆွေးနွေးရသည်ကို အားသန်သည်။ တစ်ချို့က မိမိ လေ့လာချိန် တခဏ လေ့လာမိသမျှ အနည်းအကျဉ်းရှိလည်း ဗဟုသုတဝေမျှရသည်ကို အားသန်သည်။ တစ်ချို့က ခွန်းထောက်စကားဆိုရင်း တစ်ဦးကို တစ်ဦး ပိုပြီးလေ့လာနိုင်အောင် support လုပ်ကြပေးတတ်ကြသည်။ အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးတွေ ဒွန်တွဲနေသကဲ့သို့ တစ်ချို့ကလည်း လျှောက်ပြော,လျှောက်ဖောတတ်ကြသည်။ လမ်းသစ်ကို ဖောက်သော ငှက်ငယ်များလည်း ရှိသည်။ လမ်းကြုံ လေဟုန်စီးနေသော ငှက်ငယ်များလည်း ရှိသည်။ MEF အတွင်းရှိ ဆွေးနွေးချက်တစ်ချို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံ လေ့လာမှုမှ အရင်းတည်လာရသည်။ ဆွေးနွေးချက် တစ်ချို့သည် လက်ရှိအချိန်ကာလအတွက် လိုအပ်သော ဗဟုသုတများကို မီးမောင်းထိုးပြတတ်သည်။ ဆွေးနွေးချက် တစ်ချို့သည် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက် သိသင့်သိအပ်သော ရှိသင့်ရှိအပ်သော စိတ်ဓါတ်အတွေးအခေါ်များကို ပေးထားခဲ့တတ်သည်။ နေရာ၊ ကာလ၊ ဒေသနှင့် ဆွေးနွေးသူ၊ လက်ခံသူအပေါ်မူတည်ပြီး MEF သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကျိုးပြုလျက် ရှိသည်ကိုတော့ လက်ခံရမည်သာ ဖြစ်သည်။
သေချာသည်မှာ ကျွန်တော်တို့သည် ဘာကိုမျှ အာမခံချက်ပေးမထားသော လေထုတစ်ခုအတွင်းမှာ တစ်ဦးရေးသော ဆွေးနွေးချက်မှ အခြားတစ်ဦးနှင့် သိကျွမ်းလာကြသည်။ MEF တွင် အများစုသည် တစ်ဦးဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်မှ အခြားတစ်ဦးကို လှမ်းကြည့်တတ်ကြတယ်။ ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုတွင် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတများ ပါဝင်မည်။ ဆွေးနွေးသူ၏ စိတ်ဓါတ် အခြေခံ သဘောတရားများ ပေါ်လွင်မည်။ သေချာသည်မှာ လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးနှင့် အဆင့်အတန်းသည် ထိုသူရေးသားခဲ့သော စကားလုံးများက ပြောပြပါလိမ့်မည်။ တစ်ချို့သူများသည် အရေးအသား ကောင်းတတ်ကြသည်။ တစ်ချို့သူများသည် ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းရှိသော်လည်း အရေးအသား မကျွမ်းကျင်တတ်ကြ။ အရေးအသား ပညာသည် ပညာရှင် မဟုတ်သော ပညာသင်တို့၏ နယ်ပယ်တွင် အထူးအထွေ အရေးမကြီးပေ။ အရေးကြီးသည်မှာ ဆွေးနွေးသူသည် မိမိဆွေးနွေးချက်ကို မိမိ တာဝန်ယူရဲရပေမည်။ Nick name တစ်ခုနှင့် ရပ်တည်နေသော ၀န်းကျင်တစ်ခုဟု ဆိုသော်လည်း ထိုနာမည်များသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mirror life များလည်း ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား။
MEF သည် ကောင်းကင်တစ်ခုဖြစ်လျှင် ထို အဆုံးအစမဲ့ ကောင်းကင်အတွင်း လင်းလက်နေသော ကြယ်လေးများသည် သေးငယ်သည်၊ ကြီးကျယ်သည်၊ ခန့်ထည်သည်၊ ၀ံ့ကြွားသည် ဆိုသည်ထက် MEF ကို ချစ်သောစိတ်ဓါတ်ဖြင့်သာ ရှင်သန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ MEF တွင် သတ်မှတ်ထားသော အရောင်များ၊ member အဆင့်အတန်းများသည် လူတစ်ယောက်၏ စိတ်ဓါတ်နှင့် ပညာအရည်အချင်းကို တိုက်ရိုက် ဖော်ပြနေခြင်းမဟုတ်။ MEF သည် အသွေးအသား ကာလာ မခွဲခြား၊ အနိမ့်အမြင့် ပညာ စည်းတား မထားပဲ အားလုံးသော မောင်နှမတွေရဲ့ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အိပ်မက်ဆီကို ရွက်ကြိုးတပ်ရင်း မတူညီတဲ့ ခရီးတွေကို အတူတူ မျှောလွင့်သွားဖို့ အားအင်တစ်ခု ပေးမည့်နေရာတစ်ခု၊ media တစ်ခု၊ Virtual World တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အချိန်ကာလတစ်ချို့က ပြောပြပေးခဲ့လေပြီ။
ကောင်းကင်ခရီးသွား ငှက်လေးများ အရောင်ကိုယ်စီ၊ လမ်းခရီးကိုယ်စီ၊ နားခိုရာ ကျွန်းကိုယ်စီ။ တစ်ချို့သည် တခဏ နားခိုရင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကာလရှည်ကြာ နားခိုလျက်။ တစ်ချို့သည် ဆက်လက်ထွက်ခွာလျက်။ အတောင်တူသော ငှက်များသည် အတူတူ ပျံသန်းနေကြပေဦးမည်။
ကျွန်တော် နဲ့ အတူ ဖြတ်သန်းဖူးတဲ့ MEF ရက်စွဲများအတွက် စာမျက်နှာတစ်ချို့ကိုတော့ အောက်မှာ စုစည်းထားလိုက်ပါတယ်..။ နောက်တစ်နှစ်မှာတော့ ဒီလို စာမျက်နှာများနဲ့ MEF မှာ ဖြတ်သန်းနိုင်မယ် မထင်ဖူး..။ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ time schedule များထဲမှာ MEF နဲ့ အချိန်တစ်ခုတော့ နေနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားနေဦးမယ်ဆိုတာတော့ အသေအချာပါပဲလေ...။ နောက် ... ဒီတလော ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆိပ်ကမ်းလေးဟာ အချိန်တစ်ချို့ကို recover ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်... အေးစက်နေဦးမယ် ထင်ပါတယ်..။
MEF နှစ်ပတ်လည်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပါစေ.
အတောင်တူငှက်များ အများအပြား တူညီသွာ ပျံသန်းနိုင်ကြပါစေ..
တောင်ပံလေး သေးလို့နှေးပေမဲ့ပျံသန်းနေပါဦးမည်။
အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်းတွင် အတွေးမျှားမိစဉ် အမှတ်တရ။
ဒူဒူ့ ဘလောက်လေးမှာ၊ အမှတ်တရ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခွင့်ပေးပါ။
ကိုဒူဒုကြီး - MEF နဲ့ နွယ်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေက MEF မောင်နှမတွေအားလုံး ထပ်တူ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်နော်..။ ကိုဒူဒူကြီး ဘလော့မှာ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ် :)
so, thanks for your sharing my post!